warshadaha Shoe - Digital Warshadaha Co., Ltd.
Nyala oo Hi Taxanaha
Nyala S Taxanaha
laser Xararad scanner 3D
Qaabaysan scanner 3D light
3D MAADDOOYINKA daabacaadda
Tenacity High cusbi-9006
TEMPERATURE SARE U ADKEYSATA cusbi-T1120
FDM 3D FAAFIN
FDM 3D Printer DO taxanaha
FDM 3D Printer DQ Taxanaha
FDM 3D Printer 3DDP Taxanaha
DATA-HADA KA-HOR-SIINTA SOFTWARE
codsiga 3D Daabacaadda
wax soo saarka warshadaha
model / products Fikrad
Waxbarashada iyo Cilmi-
codsiga iskaanka 3D
Mala'igtu Cultural digitization
design dambe / Qaabaynta
Adeegga Daabacaadda 3D
3D daabacaadda oo kordhiyey warshadaha kabaha
Dufcaddii A of kabaha Nike daabacay printer SL 3D ee Shanghai dukaanka xarunta flagship
Sanadihii la soo dhaafay, 3D technology daabacaadda ayaa si tartiib tartiib ah daalaeday berrinkii shoemaking. From wasakhahaasi kabaha kanban in sulubid wasakhahaasi kabaha, si wasakhahaasi soo saarka, iyo xataa calaacalaha kabaha dhammaadeen, waxa ay u muuqataa in 3D technology daabacaadda la meel walba arki karo. Inkasta oo 3D daabacay kabo aan weli la caan dukaamada kabaha, ay sabab u tahay fursadaha iman kara design iyo ahaanayta kabo 3D daabacan, kooxda ka dhisan badan kabaha gudaha iyo dibaddaba ayaa marar badan ku dadaalay in this beerta technology baxaya sannadihii la soo dhaafay.
Dardar xaqiijinta design iyo soo gaabin wareegga horumarinta
In marxaladda hore ee design kabaha, shaybaarka caaryada kabaha caadiga ah loo isticmaalo qalab dhaqanka sida lathes, gelinno daloolin, mashiinada feeray, iyo mashiinada wax taaj oo kale. habka wax soo saarka waxa uu ahaa mid aad u waqti iyo kordhay waqtiga loo baahan yahay qorshaynta iyo la cadeeyo wasakhahaasi kabaha. Taas bedelkeeda, 3D daabacaadda si toos ah iyo si dhakhso ah u bedeli karaan shaybaarka kabaha computer galay lagu daydo, oo ma aha oo kaliya guulaysta xuduudaha ee hababka dhaqanka, laakiin sidoo kale dib u soo celisa fikradda design ka fiican, oo la shaqeeyaa baaritaanka wax soo saarka iyo ayna.
Unlimited by qaab-dhismeedka, oolnimada sare iyo dabacsanaanta
Iyada oo ku saleysan faa'iidooyinka ee wax soo saarka si degdeg ah digital, technology daabacaadda 3D aan ku xaddidnayn by qaab-dhismeedka, jidaynayey samaynta Sagna oo ay u waxyoonay. Intaa waxaa dheer, 3D dabacsanaan daabacaadda fududeeyaa samaynta inuu wax ka beddelo naqshado iyo in la yareeyo kharashka ku wehlin doona sabab u Rework caaryada.
daabacaadda 3D alows posibility ee ahaanayta personalilzed
waxaa la filayaa in kabaha 3D daabacan la shakhsi kartaa costomization waayo, dadka rayidka ah. Sida caadiga ah, ay sabab u tahay qiimaha geedi socodka, alaabta ceeriin, cilmi baarista iyo horumarinta, qiimaha kabaha kartoo waa ka sii badan in ka mid ah kabaha caadiga ah. 3D daabacaadda yarayn karaa kharashka wasakhahaasi, gaabin wareegga horumarinta iyo in la siiyo wax ka faa'iidaysiga. In mustaqbalka, waxaa la filayaa in ay la kulmaan baahida gaarka ah ee macaamiisha in habka wax soo saarka ee iyadoo la yaraynayo kharashka wax soo saarka ah ee shirkadaha.
In la dhiso macaamil database macluumaad cagta
3D daabacaadda ku salaysan yahay 3D Qaabaynta macluumaadka xogta of raadkoodii macaamiisha ah ee, ka dibna wuxuu isticmaalaa printer 3D ah in ay soo saaraan insole ah, calaacalaha iyo kabo si buuxda u socon ta qaab cagta macaamiisha ah ee, nabadraadinta ayna ka mid ah line sheyga, oo waxay keeni jireen wax ku ool ah jimicsi si madal shakhsi of warshadaha kabaha ka.
madbacadaha 3D talinayaa
ahaanayta Shakhsiga: 3DSL-360 & 3DSL-450
wax soo saarka Dufcaddii yar yar: 3DSL-600 & 3DSL-800
Cinwaankaaga: No. 8666 Hunan Highway, Shanghai, Shiinaha.
Kiiska dalabka caafimaadka: Isticmaalka 3D daabac ...
Farshaxan weyn 3D daabacaadda-Venus taalada
3D daabacaadda qaybaha isticmaalka tooska ah
3D qaabka bandhigga daabacaadda
3D daabacaadda qaab caafimaad
DIR EMAIL TO US & Hel PRICE IYO FAAHFAAHINTA
Xuquuqda daabacaadda - 2010-2019: Dhammaan Xuquuqda ayaa Leh. Products Guide - Products Featured - Tags Hot - Sitemap.xml - amp Mobile